Wrestler Rusev oo ugu baaqay Sergio Ramos inuu ku biiro WWE/MISAARICADA – Gool FM
(Real Madrid) 17 Feb 2019. Xiddiga Caanka ah ee ciyaaraha WWE ama misaaricada ee reer Russia wrestler Rusev ayaa sheegay in kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos uu heysto suurtagalnimo kasta uu kaga mid noqon karo ciyaaraha WWE mustaqbalka, haddii uu doonayo inuu qeyb ka noqdo.
UEFA ayaa haatan baaritaan ku wada Sergio Ramos si loo kala ogaado in kaarkii digniinta uu qaatay kulankii Ajax ay kula ciyaareen lugta hore wareega 16-ka tartanka Champions League uu ahaa mid ku talagal uu u qaatay iyo inkale, taasoo hadii ay ku cadaato uu ganaax ku muteysan karo.
Laakiin wrestler Rusev oo si weyn u taageera kooxda Real Madrid ayaa wuxuu tilmaamay in awooda iyo dabeecada Ramos uu heysto ay ka dhigi karto inuu noqdo xirfadle caan ah ee ciyaaraha WWE, isagoo ku amaanay wax qabadkiisa cajiibka ah ee kooxda Real Madrid.
“Waxaa u doortay inuu noqdo lamaanahayga ugu fiican ee Madrid, waa ciyaaryahan cajiib ah ee aad heli karto wakhtiga iyo meesha saxda ah”.
“Wuxuu dhaliyaa goolal muhiim ah daqiiqadaha ugu dambeeya ee ciyaarta, waa hogaamiye dhab ah, waa shaqsi aad u xoogan”.
Valverde oo si RASMI ah ugu dhawaaqay Liiska xidigaha Barcelona uu ula safri doono kulanka Lyon…. (Yaa Ka Maqan Yaase Ku Soo Baxay?)